Xukuumadda waqooyiga kuuriya oo mar kale sheegtey in ay tijaabineyso gantaalaha xambaara hubka NUCKLEARka ah. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Xukuumadda waqooyiga kuuriya oo mar kale sheegtey in ay tijaabineyso gantaalaha xambaara...
Xukuumadda waqooyiga kuuriya oo mar kale sheegtey in ay tijaabineyso gantaalaha xambaara hubka NUCKLEARka ah.
Madaxweynaha dalka Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-Un ayaa maanta sheegay inay dhawaan tijaabin doonaan gantaallada xambaara madaxyada hubka halista ah ee Nuclear-ka iyo kuwa riddada dheer.
Dhanka kale, Waddamada Koonfurta Kuuriya iyo Jabbaan ayaa maanta waxay uga digeen dalka Waqooyiga Kuuriya in tijaabada gantaallada ay sameynayaan, ay noqdaan kuwo xad-gudub ku noqon kara waddamadooda.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed, Park Geun-Hye ayaa maanta sheegay in in haddii Dowladda Kuuriyada Waqooyi ay sii waddo Tijaabooyinka noocan oo kale ah ay ku keeni karto burbur dhaqso ah oo ku yimaada, wuxuuna ugu baaqay inay beddelaan mowqifkooda tijaabada gantaallada.
“Waxay noola muuqataa tijaabooyinkan ay sameynayso Xukuumadda Waqooyiga Kuuriya mid ay ku daan-daansanayso Beesha Caalamka, waayo waxay dadaal weyn ugu jiraan sidii ay u horumarin lahayd hubkeeda Nuclear-ka, taasoo ammaankooda khatar weyn ku noqon karta,” ayuu hadalkiisa daba dhigay Park Geun-Hye.
Ugu dambeyntii, xukuumadda Pyongyang ayaa waxay muddo fog bac-rimin iyo horumarin ku wadday hubkeeda Nuclear-ka, taasoo cabsi weyn ay ka qabaan inay Hubkaan adeegsato Mareykanka iyo waddamo kale oo Beesha Caalamka ka tirsan.
Previous articleDanjiraha Soomaaliya u fadhin doona dalka Australia oo M/weyne Xasan SHeekh ka gudoomey waraaqaha aqoonsiga.
Next articleDuubabka dhaqanka Beledweyne oo uu hor kacayo Ugaas Xasan Ugaas KHaliif oo la kulmey wefdi ka socda Q/M.